API - MYSTERY ZILLION
March 2015 in PHP
what is Restful API ? how different with API ?
please read at http://blog.saturngod.net/knowledgebase/restful-api-and-php-framework
API is actually backend codes
you can learn in here=>http://www.restapitutorial.com/
for api authentication=> JWT(Json web token) is effective
API Development အတွက် Security ပိုင်းကိုရော ဘယ်ဟာတွေသုံးလဲမေးချင်ပါတယ်။ ရှာကြည့်တော့ oAuth သုံးဖို့ညွှန်းကြပေမယ့် လောလောဆယ် oAuth ကို လေ့လာရမှာ အချိန်ရှိသေးတာကြောင့် မသုံးဖူးလို့ စဉ်းစားထားတယ်။
API သုံးမယ့် Client တိုင်းအတွက် Password ကို generate လုပ်ပေးပြီးပို့ပေးထားမယ်။ သူတို့က API request လုပ်တိုင်း ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Password ကို Request ထဲမှာထည့်ပို့ပေး။ ပြီးမှကိုယ့်ဘက်ကသူတို့ request လာရင် ပါလာတဲ့ password ကို စစ်ပြီးမှ နောက်အပိုင်းတွေကိုဆက်သွားမယ်။ အဲဒီ flow အတိုင်းရော အဆင်ပြေလား။
OAuth ပဲ မသုံးဖြစ်ရင်တော့ Pre-Generated Password က သိပ်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ် ပြောင်းချင်တယ် ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Client တွေမှာ လိုက်ပြင်ပေးရမှာ Client တွေအတွက် API Key နဲ့ Secret Key ကို Pre-Generate လုပ်ပြီးတော့ပေး Request တိုင်းမှာထည့်ပေး အဲဒါအပြင် User တွေကို Login ဝင်ခိုင်းပေါ့ Login ဝင်ပြီးရင်လည်း RESTful တွေကျတော့ State မရှိတော့ Cookies တွေ Session တွေလည်းမရှိ User ရဲ့ Password ကိုကျတော့ သိမ်းထားလို့ အဆင်မပြေဘူး အဲဒီတော့ Login ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Token တခု Generate လုပ်ပေး အဲဒါကိုသိမ်းထား Token ကိုလည်း Expire Date/Time နဲ့ Validity ထားပေါ့ Request တိုင်းမှာ API Key, Secret Key, Username, Token ကိုထည့်ပြီးတော့ Request လုပ်ခိုင်း အားလုံး Valid ဖြစ်မှပဲ Request ကိုလက်ခံပေါ့ Token Expired ဖြစ်သွားရင် ထပ်ပြီးတော့ Login ဝင်ခိုင်းပေါ့လေ Concept ကတော့ OAuth လို Concept ပဲ Pre-Generated Password ထက်တော့ အများကြီးအဆင်ပြေမယ် User တယောက်ကို Remove လုပ်ချင်ရင်လည်း Token ကိုပဲ Expired လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
Thanked by 1 moeko
Thanked by 1 CalmHill